ubusazi: 'ok, google' umyalelo welizwi uza ukhubazeka kwi-samsung & apos; s galaxy s6, ilizwi elikhuthaziweyo endaweni yoko
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Ngaba ubusazi: 'Kulungile, ilizwi likaGoogle' liyafika likhubazekile kwi-Samsung S & Galaxy S6, S Voice ephakanyisiwe endaweni yoko
Ngaba ubusazi: 'Kulungile, ilizwi likaGoogle' liyafika likhubazekile kwi-Samsung S & Galaxy S6, S Voice ephakanyisiwe endaweni yoko
Inkqubo ye-'Kulungile, Google'Umyalelo sisiseko seqonga le-Android kunye neapos; amandla okuqondwa kwelizwi: kuninzi lweefowuni zamva nje, unokuthi 'Kulungile, uGoogle' naphina kwaye ubenefestile yokwazisa ngezwi ngokucocekileyo, kodwa ngelishwa, olu khetho lukhubazekile i-Galaxy S6, kwaye esi sigqibo sibonakala ngathi sinenjongo.
Ngelixa bekusungulwa i-Galaxy S6 ungasebenzisa u-'Ok, Google 'ukuyalela nakwesiphi na isikrini nokuba isikrini sicinyiwe (ngelixa ifowuni ihlawulisa), ngoku, emva kohlaziyo, unokusebenzisa u-'Kulungile' , UGoogle 'kwiscreen sasekhaya (apho ungacofa ngokulula kwi icon yemakrofoni kwindawo yokukhangela).
I-S-Voice ibonakala inyuselwa ngendleko zokuKhangelwa kweLizwi kuGoogle
Kwangelo xesha, i-Samsung kunye ne-apos; inkonzo yokwazisa ngelizwi eliphikisayo i-S-Voice yayinokusebenza okuyinyani, okusoloko kusebenza ukusuka ekuhambeni, njengoko abasebenzisi banokudubula imiyalelo yelizwi nokuba isikrini sicinyiwe kunye nesixhobo kwitshaja. Ngoku, sisisombululo sodwa ukuba ufuna ukukhwaza imiyalelo yelizwi kuyo nayiphi na indawo ngaphakathi kwifowuni njengo 'Kulungile, uGoogle' ubonakala ngathi ukhubazekile ngabom.
Oko kukuphoxeka, njengoko kubonakala ngathi injini yeGoogle & apos yokwazisa ilizwi iyakhawuleza kwaye inamandla kuneS-Voice ye-Samsung kunye neapos.
Kuya kufuneka, nangona kunjalo, siqaphele ukuba akucaci nokuba olu tshintsho luchaphazela zonke iindlela ezahlukeneyo zeGPS S6 ezikhoyo kwihlabathi liphela. Usenayo 'Ok, Google' ukuyalela ukusebenza kuyo nayiphi na isikrini? Sazise, ​​kwaye ungathandabuzi ukuba usixelele nokuba yeyiphi imodeli ye-S6 oyisebenzisayo.
Kulungile, ukusebenza kukaGoogle ngaphambi kohlaziyo Kulungile, ukusebenza kukaGoogle kukhubazekile emva kohlaziyo lomthombo: Reddit
Iqakamba engenazingcingo iphuma ngaphandle kweshishini
Isamsung yeSamsung ye-S6 kunye ne-S6 yendlela yokufundisa: ungasetha njani uvimba umnxeba
I-Amazon Kindle Fire HD 8.9 'iyahlulwa: uninzi lwe-Samsung ngaphakathi
I-Minecraft Edition Pocket amanqaku amanqaku ohlaziyo olukhulu-uninzi lomxholo omtsha kunye neempawu kwi-tow
UGoogle Hum ukukhangela uphononongo: Ukufumana iingoma ezingama-20 ngeelwimi ezingama-20
Ungayitshintsha okanye uyikhubaze njani i-SIM PIN kwi-LG G4 yakho
IOS 15: Uguqula njani nasiphi na isicatshulwa kwi-iPhone yakho
Eyona njongo ijolise kuLwesihlanu oMnyama: izinto esizilindeleyo